Création : 7 septembre 2019
Nambaran'i Jesôsy fa zava-misy tokoa ny fanjakan'Andriamanitra ary azontsika atao ny ho isan'izany izao ankehitriny izao. Naniraka ireo mpianany Izy hanambara izany amin'ny olon-drehetra ety ambonin'ny tany sy hitory ny filazantsara. Nilaza tamin'izy ireo mba hanompo ny hafa Izy, ary niriny ny hizarany maimaim-poana tahaka izay efa nanomezany ho azy ireo koa (vakio ny Mat. 10:5-8).
Nambaran'i Jesôsy koa fa hafa mihitsy ny fanjakany, "tsy avy amin'izao tontolo izao" izany (Jao. 18:36). Miandry fatratra ny fotoana hanoloan'izany ny fanjakana rehetra eto an-tany Izy; amin'izay fotoana izay dia ho tonga amin'ny fahafenoana ny fanjakan'Andriamanitra.
Amin'ny maha-Advantista antsika dia miandry ny fiavian'izany fanjakana izany isika. Olon'ny fanantenana isika, tsy mikasika ny fanjakana ho avy sy ny tany vaovao ihany, fa fanantenana izay manova ny fiainantsika amin'izao fotoana izao koa. Izany fanantenana izany no iainantsika amin'izao eo am-piandrandrana ny fiainana ho avy, ary koa hiasantsika mba hampisy fiovana eo amin'ny fiainana ankehitriny ho fanehoana ny fanantenantsika izany fiainana ho avy izany.